Horudhac: Arsenal vs Newcastle United… (Gunners oo indhaha ku haysa inay dib ugu soo laabato waddada guulaha ee Premier League) – Gool FM
Haaruun January 18, 2021
(London) 18 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa indhaha ku haysa inay dib ugu soo laabto waddada guulaha ee horyaalka Premier League, marka ay sii wadi doonaan fasal ciyaareedkooda 2020-21, isla markaana ay caawa garoonkooda ku soo dhoweynayaan naadiga Newcastle United.
Tha Gunners ayaa barbaro goolal la’aan ah la soo gashay Khamiistii Kooxda Crystal Palace, waxaana ay caawa doonayaa inay dib ugu soo noqoto waddada guulaha horyaalka Premier League.
Dhinaca kale Kooxda Newcastle United ayaa kulankan soo galaysa garoonka iyadoo kulankeedii ugu dambeeyey guuldarro 1-0 ah kala soo laabatay Sheffield United oo ay booqatay.
Arsenal ayaa rajaynaysa in daafaceeda dadabka bidix ee Kieran Tierney uu diyaar u noqon doono kulankan, kaddib markii tijaabo scan ah la marsiiyey, isla markaana dhaawaciisa uusan ahayn mid halis ah.
Pablo Mari ayaa garoomada kaga maqnaan doona dhaawac kaa la mid ah, laakiin Gabriel Martinelli ayaa laga yaabaa inuu taam u noqdo kulankan.
Kabtanka Kooxda Newcastle United ee Jamaal Lascelles ayaa safan kara kulankiisii ugu horreeyey horyaalka muddo labo bilood ah kaddib, isagoo ciyaaray 45-daqiiqo kulankii FA Cup-ka oo ay guuldarrada kala kulmeen Arsenal markii uu ka soo laabtay Korona Fayras uu la maqnaa.
Allan Saint-Maximin ayaa sidoo kale ku dhow inuu dib u soo laabto kaddib markii uu Fayrasku haleelay bishii November.
Jamal Lewis iyo Federico Fernandez ayaa la qiimeyn doonaa xaaladdooda, halka Ryan Fraser uu ganaax ku seegi doono ciyaartan kaddib casaankii uu qaatay kulankii Sheffield United.
>- Arsenal ayaa guuleysatay 14 ka mid ah 15-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay kooxdan la ciyaartay horyaalka Premier League, iyagoo kulanka kale guuldarro 2-1 ah la kulmay iyagoo marti ahaa bishii April 2018.
>- Newcastle ayaa guuldarro la kulantay siddeed kulan oo xiriir ah horyaalka oo ay booqdeen Gunners tan iyo markii ay 1-0 uga soo adkaadeen bishii November ee sanadkii 2010.
>- Kulankan ayaa imaanaya kaliya sagaal maalmood kaddib markii Arsenal ay 2-0 ku garaacday Newcastle kulan ka dhacay garoonkeeda oo qeyb ka ahaa wareegga saddexaad ee FA Cup-ka.
>- Kooxda Mikel Arteta ayaa qaadatay 10 dhibcood 12-dhibcood oo suurogal u ahaa inay hesho tan iyo Christmas-ka, waxaana ay guuleysatay 3 kulan, halka ay barbaro galeen kulan kale tan iyo markaas.
>- Waxay shabaqooda gool ka ilaashan karaan shan kulan oo isku xigta tartammada oo dhan markii ugu horreysay tan iyo markii ay gaareen lix kulan oo xiriir ah inaan gool laga dhalin Janaayo ilaa Febraayo ee sanadkii 2009-kii.
>- Arsenal ayaa guuleysatay mid kasta oo ka mid ah lixdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka Premier League ku ciyaartay garoonkeeda maalin Isniin ah, kooxdii ugu dambeysay oo ay wajahdayna waxa ay ahayd isla Newcastle bishii April ee sanadkii 2019-kii.
>- The Gunners ayaa barbaraysay rikoorkeeda kooxda ee afar kulan oo Premier League in hal xilli ciyaareed lagu garaaco garoonkeeda Emirates, taasoo ay horay u sameysay fasal ciyaareedkii 2010-11, guuldarrooyin ka badan kulama kulmin garoonkeeda tan iyo xilli ciyaareedkii 1994-95, markaasoo ay ku ciyaarayeen garoonka Highbury.
>- Waxa ay ku guuldarreysteen inay gool dhaliyaan todobo kulan oo horyaalka ah fasal ciyaareedkan 2020-21, waana in ka badan inta kulan oo ay gool dhalin waayeen guud ahaan xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, shan sanadood ayaana laga joogaa markii ay ku guuldarreysteen inay siddeed kulan gool dhalin kari waayaan kal ciyaareedka.
>- Pierre-Emerick Aubameyang ayaa gool dhaliyey mid kasta oo ka mid ah saddexdii kulan ee la soo dhaafay oo uu ka horyimid kooxda Newcastle United.
>- Waa guul la’aan siddeed kulan oo ay ciyaareen tartammada oo dhan tan iyo markii ay garaaceen West Brom ciyaar qeyb ka ahayd horyaalka oo dhacday 12 bishii December, waxaana ay la kulmeen siddeedaas kulan 2 barbaro iyo 6 Guuldarro.
>- Kooxda Newcastle United ayaa gool dhalisay hal jeer lixdeedii kulan ee la soo dhaafay.
>- Waxay lumin karaan saddexdooda kulan ee furitaanka horyaalka sanadka markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 1989-kii horyaalka heerka koowaad.
>- Magpies ayaa khasaaro la kulantay shan kulan oo xiriir ah oo ay bannaanka ku soo ciyaareen markii ugu horreysay tan iyo December 2015 iyo April 2016.
>- Newcastle ayaa badisay shan ka mid ah sagaalkii kulan ee ugu dambeeyay Premier League ee ay ku ciyaartay London, taas oo ka duwan labo guul oo ay gaartay 20-kii kulan ee ay booqatay Magaaladaas.
>- Steve Bruce ayaa guul la’aan ah 17-kiisii kulan ee uu booqday Arsenal isagoo tababare ah tartammada oo dhan, waxaana uu ka soo qaatay Gunners oo uu booqday 17-kaas kulan 4 barbaro iyo 13 guuldarro.